नेकपा विवादबारे नेता भट्टराई भन्छन्– ‘मेरा परेनन्, तेरा परेनन् भन्ने बेला होइन’ : Dr. Rajan Bhattarai
नेकपा विवादबारे नेता भट्टराई भन्छन्– ‘मेरा परेनन्, तेरा परेनन् भन्ने बेला होइन’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भए पनि अन्तिम संरचना बनाउने गृहकार्यमै छ ।
७ प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी भर्खरै तय गरेको छ । तर, यहि विषयमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘बखेडा’ झिकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, विदेश भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सोमबारमात्र फर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको निर्णय मान्न नसकिने ‘कठोर’ अभिव्यक्ति नेपालले दिए । यसले नेकपालाई केही असर गरेको ठानिन्छ ।
दैनिक नेपालले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डा. राजन भट्टराईलाई सोधेको थियो– ‘यस्तो विवाद कसरी आयो ? के व्यवस्थापन हुन नसक्ने विवाद हो ?’
अहिले यस्तो विवादको कुरा आएको छ । सचिवालयको बैठकले गरेका निर्णयमा उहाँको असन्तुष्टिका विषय पनि बाहिर सुनियो । तर नेता नेपाल बाहिर भएका बेला बैठक बसेको थियो । बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित उपस्थित ७ जना सदस्य मध्ये सचिवालयका ४ जनाको सहमतिका आधारमा प्रदेश कमिटीमा इञ्चार्ज, सह–इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव छानिएको थियो ।
बालुवाटारमा त्यस दिन बैठक चलिरहेका बेला अध्यक्षद्वय र महासचिवले एउटा प्रस्ताव ल्याउनुभयो । सर्वसम्मतिले पास भयो । माधव नेपाल विदेश जाँदा बैठक बस्दैन होला भन्नुभएको रहेछ । तर, सर्वसम्मत हिसाबले बैठक बसेपछि निर्णय भएछ । यसमा उहाँको असन्तुष्टि देखिन्छ । तर यो त्यति गहिरो विवाद निकाल्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन ।
हिजोका स्थितिमा हेर्ने हो भने पनि ७ वटा प्रदेश मध्ये ४ वटा प्रदेशमा पुराना मान्छे छन् । प्रदेश १ मा भीम आचार्य, २ मा सत्यनारायण मण्डल, ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुदूरपश्चिममा भिम रावल । नयाँ भनेको गण्डकीमा पृथ्वी सुव्वा गुरुङ, ५ नम्बर प्रदेशमा शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेशमा जनार्दन शर्माले पाउनुभएको छ । सह–इञ्चार्चमा नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ । हिजोको हिसाबले असन्तुलित छैन ।
जिम्मेवारीका हिसाबले पनि तत्कालिन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा को कता थियो भनेर हेर्दा पनि असन्तुलित छैन । हाम्रो तहबाट हेर्दा यस्ता विषयलाई विवाद बनाइनु हुँदैन । बोल्ने मान्छेले पनि कुन कुरा कहाँ कसरी राख्ने भन्ने हेक्का लिनुपर्छ ।
उहाँले राखेका असहमति सम्बोधन गर्न नसकिने होइन । जीवन्त रहेको पार्टीमा यस्ता कुुरा हुन्छन् । आउँछन् । यो विवादलाई बढाएर लिएर जानुको अर्थ छैन ।
इतिहासले दिएको दायित्व र पाएको अवसरमा विवाद बढाएर लैजानु हुँदैन । पार्टीका विधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । अरुले अप्ठेरो पार्ने कोशिश गरिरहेका छन्, अरुको स्वार्थमा होइन, हाम्रा अभिभारालाई पूरा गर्नुपर्छ ।
संसदमा पनि सरकारका विषयमा आलोचना भयो । सरकारले चाहेको लक्ष्य लिन नसक्दा निस्किएका असन्तुष्टिलाई केहीले फाइदा लिन खोज्दा तिनलाई बल पुग्ने काम गर्नुहुन्न । विवाद नहुुँदा सबैभन्दा राम्रो तर विवाद व्यवस्थापन गर्ने तहमा छ । एकीकरण लामो सोचेर गरेका कारणले साना तिना विवाद आउँछन् । कमिटी बनाउँदा मेरा परेनन्, तेरा परेनन् भन्ने गर्नु हुन्न ।
अहिले अवस्था अलिकति धुमिलिएको जस्तो देखिन्छ । धुुमिलिएको वातावरण सङ्ग्ल्याउन केही समय लाग्छ । तर, त्यति परसम्म हामी पुगिसकेका छौं भन्ने छैन ।
नेताहरू बसेर छलफल गरेपछि उठेका केही विवादको समाधान हुन्छ । अहिले प्रायः नेताहरू विदेश भ्रमणमै व्यस्त हुनुभएका कारणले पनि केही समस्या देखिएको जस्तो लाग्छ ।
राजन भट्टराई र निश्चलनाथ पाण्डेसंग
Dr. Rajan Bhattarai Appointed as Foreign Affairs Adviser to the Prime Minister
सत्ता गुमाउनु पर्दा काँग्रेसलाई छटपटी भएको छ : डा. भट्टराई
All rights reserved © 2019 Dr. Rajan Bhattarai